Izinto eziluncedo nezingeloncedo zokuboleka imali ebhankini
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo zokuboleka imali ebhankini
It is a ingqiqo bank oluluqilima ukhuseleko ngokoMthetho ukuba lingaboleka imali, kodwa ngenxa yokuba kukho iintlobo ezahlukileyo izicwangciso-mboleko, nto leyo ibe abanye abantu ukuba isigqibo okanye awunamatheli okulungileyo.
Ukongeza, izibonelelo ukuboleka imali ebhankini kubalulekile Kakade ukuqonda nazo neengxaki.
ebhankini, ezifana merit
iibhanki kunye nezezimali abathengi ukuba ukuboleka imali, ukuba kukho iintlobo nababolekisi, kukuba ukuboleka imali ebhankini iya kuquka iinzuzo ezifana nezi zilandelayo.
yi kwenzala ephantsi, kuxhomekeke ukuba usebenzise indlela
ikhadi lebhanki, amaqondo enzala kuthelekiswa nemali umsebenzisi imisiwe ephantsi.
Ngokukodwa, i-mboleko multi-injongo, ngokuba ezamahala, kukho ibhange kungaba kuqashwe kwi elisezantsi kakhulu ngomyinge wenzala we malunga ne-4%.
Ngoko ke, nkqu nentwana yokuboleka, kuya kufuneka umthwalo ngaphantsi ngexesha buyiselo.
Ukuba isicelo ukuboleka kwakhona ityala agudileyo
bank esekelwe kwi-Internet, ukuba umntu ingxelo kwangaphambili, uza kuzuza Indawo sicelo egudileyo.
idilesi okanye igama, ngokuba ezifana nobudala kunye nendawo yomsebenzi sele libhalisiwe, uya emva kugqiba ukuba nihluthe, ezifana imeko yokuboleka. Ngenxa evumela isicelo esivela
smartphone, ikhuselekile ebantwini nabo abanalo ixesha okanye umsebenzi ofana okanye wasekhaya.
Ukongeza, iibhanki ziye ukutshintshwa kwemivuzo yokuqala ye-akhawunti, kuya kuba rhoqo ulwazi lwamatyala ukufika impinda ngaphezulu kunamanye amaziko zemali.
yoko, kuba abanye kunokukhokelela ukwandisa kwi amazinga enzala asezantsi kunye nemali ubuninzi bemali, ukusuka ixabiso, ukuba Okokuqala zebhanki zazo eziphambili bacinge malunga esisikhupheli sokuxhaphakileyo, ngokuba kucetyiswa.
mali oluhlangeneyo kwakhona noxolo lwengqondo xa ufuna < / H2>
ityala yomboleki yeentengo zemboleko, nangona iimviwo zokuboleka okubi kakhulu, lo umda lokuqala jikelele malunga 500,000 ukusuka 100,000.
Noko ke, xa esenza mboleko ebhankini, oko kwakhona akuqhelekanga ukuba mda iye yabekelwa phezulu yen million 10 ukusuka yen 5 million.
Noko ke, oku libali ukuba amboleke iimoto kunye ezithengiswayo eliyinhloko. Xa usenza mboleko egameni
ezinjalo iindleko zokuphila, ukuya kwesinye kwisithathu ingeniso, kwaye kuba ezimiselwe ngumthetho, kunye nokuba bangaphi awukwazi ukwenziwa eboleka kuphela kweli qondo liphezulu.
isicelo sakho isishwankathelo kungenzeka ukuba mboleko
ngaphezulu zishwankathelwe ukuboleka "ukudityaniswa kwetyala" Kwakhona, ungasebenzisa ekubolekeni evela kwiibhanki.
Oku kwakhona inkonzo mboleko yebhanki eyahlukileyo ixabiso eliphezulu liza kunyuka. Ekubeni kunokwenzeka ukuba ukucinezela
inzala kunye inzala eninzi, uya kuba ngabantu ekhuselekileyo abo besengxakini xa intlawulo.
nalo ixesha elide ezingalunganga phambi kokuboleka
Ukuba uboleke imali ebhankini
, isicelo senziwe ezifana Internet okanye i window.
Noko ke, azixhalabise yesiphumo uviwo mhlawumbi emva kweentsuku ezimbalwa ukusuka kusuku olulandelayo. Ukuba uboleke imali
ngakumbi kunye kukuthi, kuviwo ngcaciso imfutshane waphawula Let ukuba kuthatha ixesha.
ngemali yabathengi kwakunye kwiminyaka yakutshanje, ukuze benza inkonzo ngokusekelwe iimviwo nesantya e Uri. Nangona ezinjalo
sixa sikhulu kwaye yokuqala ukuboleka kulindeleke ukuba ibe ngaphantsi, kufuneka imali kwangoko, bekuya kuba iindaba ezilungileyo kubantu bonke.
Ukongeza, ekubeni umyinge wenzala kwakhona indawo yesazela inkulu, nceda uzame ukubona website ibhanki okoko nje nexhala.
Ngokukodwa, ukuba ikhadi mboleko lebhanki esekelwe kwi-Internet, kukho kwakhona indawo ebizwa kunokwenzeka de ngokutsha mini-mboleko mini.
Noko ke, ngenxa yokuba akukho window ukuhambisa amaxwebhu afunekayo, ingqalelo ukuya kwindawo apho uhlobo lwama umhla kamva. Kwezinye iimeko
, amaxwebhu zinga ukuboleka ukufikelela, kuba kunjalo ebizwa ukuqinisekisa ukuba ubhalisele ukusuka bafunda kakuhle.
ikhadi lebhanki mboleko ke ubuninzi iingenelo ukwehlisa izinga lenzala.
ezifana xa ufuna ukwenza isicelo ukudityaniswa kwetyala yaye xa ilifa lokwenene kwaye aphezulu njenge imoto evenkileni, ukuze sinciphise ukunciphisa intlawulo yokugqibela iya kuba umviwa yokuqala.
Ukongeza, ibhanki yindawo apho iingcali ngendlela yokuqhuba imali ukusebenza. Okanye
ukubuyisela ngexesha ilondoloza ubomi ukuba Tatere olunjani isicwangcwiso sentlawulo, kwaye kulula ukuba bajonge kwenzala, kuquka izinto ezifana nendlela kakhulu ukuba njengesikhokelo, abo baxhalabile malunga ukuboleka, kuqala zama ukuthetha ebhankini i kwakhona ngumbono olungileyo.